Wararka Suuqa Maanta: Paul Pogba oo qirtay ku laabashada Juventus, Frank Lampard oo soo laabanaya iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Paul Pogba oo qirtay ku laabashada Juventus, Frank Lampard...
Wararka Suuqa Maanta: Paul Pogba oo qirtay ku laabashada Juventus, Frank Lampard oo soo laabanaya iyo Qodobo kale
Liverpool ayaa miisaameysa inay u dhaqaaqdo garabka Real Madrid iyo xulka Spain Marco Asensio, oo 25 jir ah, kaasoo la sheegay inuusan ku faraxsaneyn Bernabeu. (Mirror)
Milkiilayaasha cusub ee Newcastle ayaa hiigsanaya inay kooxda ka dhigaan mid ka weyn Manchester City iyo Paris St-Germain oo iyagana leh milkiileyaal ka soo jeeda Bariga Dhexe. (Thetimes)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa sheegay inuu weli xiriir la leeyahay saaxiibadiisii ​​hore ee Juventus , laakiin 28 jirka reer France ayaa ku adkeysanaya inuu diirada saarayo inuu xilli ciyaareedka si fiican ugu soo gabagabeeyo Old Trafford isagoo meesha ka saarin dib u laabashadiisa. (Sport Mediaset)
Tababarihii hore ee Chelsea Frank Lampard iyo maamulaha Rangers Steven Gerrard ayaa ku jira qorshaha beddelka tababaraha Newcastle Steve Bruce, kaasoo sheegay inuu filayo inuu waayo shaqadiisa. (Telegraph)
Manchester City ayaa dooneysa inay wadahadalo heshiis kordhin ah la furto Raheem Sterling, oo 26 jir ah, mana doonayaan inay iska iibiyaan weeraryahanka reer England, kaasoo wax ka yar labo sano uga harsan tahay qandaraaskiisa. (Thesun)
Barcelona ayaa si aad ah loola xiriirinayay Sterling waxayna Manchester City weydiisan doontaa garabka reer France Ousmane Dembele, oo 24 jir ah, beddelkeeda haddii laacibkoodu u dhaqaaqo Spain. (El Nacional)
Juventus ayaa dul dhigtay 25.4 milyan ginni ciyaaryahanka khadka dhexe ee Mareykanka Weston McKennie, oo 23 jir ah, kaasoo ay bartilmaameedsaneyso Tottenham . (Calcio Mercato)
Weeraryahanka kooxda Liverpool Divock Origi ayaa lagu soo waramayaa in loo soo bandhigay Barcelona si uu u noqdo saxiixiisa bisha Janaayo. Weeraryahanka reer Belgium oo 26 jir ah ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana uu waqti kooban ku haystay kooxda Jurgen Klopp. (Thesun)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Harry Winks, oo 25 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu u wareego Everton oo uu ka tago Tottenham bisha Janaayo si uu u helo waqti dheeri ah. (Caughtoffside)
Kooxaha Juventus iyo Inter Milan ayaa doonaya inay la soo saxiixdaan 25-jirka reer Belgium ee daafaca dambeedka uga ciyaara Belgium Timothy Castagne. (Le Derniere Heure)
Arsenal ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Zenit St Petersburg iyo weeraryahanka reer Iran Sardar Azmoun, oo 26 jir ah, si ay badal ugu noqdaan 30 jirka reer France Alexandre Lacazette, kaasoo qandaraaska uu kula jiro kooxda Premier League uu dhacayo xagaaga soo aadan.(Teamtalk)
Valencia, Real Betis iyo Rayo Vallecano ayaa la filayaa inay ku dagaalamaan saxiixa weeraryahankii hore ee Arsenal iyo Manchester United Alexis Sanchez, oo 32 jir ah, kaasoo aan ka helin Inter Milan boos joogta ah. (Gazzetta dello Sport)
AC Milan ayaa si aad ah u dooneysa inay lasoo saxiixato daafaca reer France Samuel Umtiti, oo 27 jir ah, kaasoo ay kala soo wareegeyso Barcelona bisha Janaayo. (Calcio Mercato)
Weeraryahanka Torino iyo Talyaaniga Andrea Belotti oo 27 jir ah ayaa si bilaash ah uga tagi kara kooxda marka uu dhammaado qandaraaskiisa. (Fabrizio Romano)
Weeraryahanka reer Serbia Dusan Vlahovic, oo 21 jir ah, kana tirsan Fiorentina , iyo weeraryahanka reer Argentina ee Mauro Icardi, oo 28 jir ah, kana tirsan Paris St-Germain , ayaa ku jira raadaarja Juventus . (Gazzetta dello Sport)
Manchester United iyo Chelsea ayaa diirada saaraya Xidiga Stoke City ee Emre Tezgel, Manchester City ayaa sidoo kale la sheegay in ay isha ku yarkaan. (DailyStar)
Manchester City ayaa sidoo kale ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa 19-jirka weerarka uga ciyaara kooxda Espanyol Mateo Joseph, kaasoo sidoo kale xiiso ka helay Leeds. (Dailymail)
Previous articleLiverpool oo doonaysa xiddiga Aguibou Camara ee qadka dhexe uga Ciyaara Olympiacos
Next articleManchester City oo go’an adag kasoo saartay Mustaqbalka Xidiga Raheem Sterling